အမှတ်တရ ပုဂံပြည် အပိုင်း – ၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အမှတ်တရ ပုဂံပြည် အပိုင်း – ၃
အမှတ်တရ ပုဂံပြည် အပိုင်း – ၃
Posted by we R one on Jan 21, 2012 in Creative Writing, Local Guides, Photography, Travel | 12 comments
မနူဟာဘုရားကို ပုဂံရောက် သထုံမင်း မနူဟာမင်း တည်ခဲ့တဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်..။ ကွယ်သုံးကွယ်ဘု၇ားလို့ လည်း ခေါ်ကြတယ်..။ မနူဟာဘု၇ားကို မမြင်၇အောင် အနော်၇ထာက ဘု၇ားေ၇ှ့မှာ ဘု၇ားစောင်းတန်းဆောက်လိုက်တယ်.. ဒီတော့ မနူဟာဘု၇ားကို မမြင်၇တော့ဘူး.. အဲဒါ ကို မနူဟာ ၇ဲ့ အမျိုးတစ်ယောက်က အနော်၇ထာ ဆောက်ထားတဲ့ စောင်းတန်း ကို မမြင်၇အောင်ေ၇ှ့ ကနေ ညောင်ပင်စိုက်လိုက်တော့ .. ကွယ်သုံးကွယ် ဘု၇ားဖြစ်သွာတာပေါ့..။ ဘုရား ထဲကို ဝင်လိုက်၇င် တော်တော်ကြီးတဲ့ သပိတ်ကြီးတစ်ခု ကို အ၇င်တွေ့၇ပါတယ်..။ သပိတ်ထဲကို အလှူငွေထည့်လို့၇အောင် လှေကား တစ်ခုလည်း လုပ်ပေးထားပါတယ်..။
ဘုရားဂူအတွင်း မှာ ထိုင်တော်မူ ဆင်းတုတော်ကြီး ၃ ဆူနှင့် အနောက်ဘက်မှာ လျာင်းတော်မူ ဆင်းတုတော်ကြီး တစ်ဆူ ရှိပါတယ်..။ အရှေ့ဘက် က ဘု၇ားဆို၇င် တော်တော် ကိုကြီးလို့ ဂူအတွင်းနေ၇ာ အပြည့်ဖြစ်နေတယ်..။ ဘု၇ား၇ဲ မျက်နှာတော် ကိုမော့ပြီး ဖူး၇တဲ့ အတွက် ဦးထုပ်တောင် ကျွတ်ကျတယ်လို့ Guide က ပြောပါတယ်..။ ကျွန်မ က ဦးထုပ် ဆောင်မထားတဲ့ အတွက် တကယ်ကျွတ်မကျွတ် မသိခဲ့၇ပါဘူ..။ အနော်၇ထာမင်း လာဖုး၇င်တော့ မကိုဋ္ဋ်တော် ကျွတ်ကျပြီး ရာဇ အိဒြေ္နပျက်အောင်လို့တဲ့ တမင်တကာ မော်ဖူး၇အောင် တည်ထားခဲ့တာတဲ့..။ ဘု၇ားဆင်းတုတော်ကြီးကို မလှုပ်သာ မလှည့်သာ ဖြစ်အောင် ကျပ်ကျပ်တည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။ ဘု၇ားဂူထဲ ကို ဝင်သွားမယ် ဆို၇င် စိတ်ကျဉ်ကျပ်ပြီး အသက်ရှုမဝသလို ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ Guide က ကြိုပြောထားပါတယ်။ တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးကြီးပဲ..။ မနူဟာမင်း က အနော်ရထာရဲ့ သုံးပန်းအဖြစ် နေ၇တုန်းက စိတ်ကျဉ်ကျပ်တာ ကို ပေါ်လွင်အောင် အဲလို ဘု၇ားဆင်းထုကို အကြီးကြီးနဲ ကျဉ်ကျဉ်ကျပ်ကျပ် ဖြစ်နေအောင်ထားခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။ သထုံပြည်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားကြောင်း အနော်၇ထာ သိ၇ချိန်မှာ ပိဋ္ဋိကတ် ၃ ပုံ နဲ ရှင်အာရဟံ ကို ခန ငှားပီး ပင့်တယ်ပေါ့လေ..။ အဲဒီ အခါ မနူဟာမင်း က ပုဂံသား အ၇ိုင်းအစိုင်းတွေ ဗုဒ္ဓသာသနာ နဲ တူလို့လား တန်လို့လား.. ဘာညာကွိက လျှောက်ပြောတာပေါ့..။ အဲဒါ ကို အနော်၇ထာ က ကြားပြီး စိတ်ဆိုးလို့ သထုံကို ပါသိမ်း ၊ မနူဟာမင်း ကိုလည်း ဖမ်း၊ ပိဋ္ဋိကတ် ၃ ပုံ နဲ ရှင်အာရဟံ ကိုလည်း ပုဂံကို ပင့်ဆောင့်ပြီး ပထမ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ မနူဟာမင်းဟာ အနော်၇ထာရဲ့ သုံပန်းအဖြစ် စိတ်ကျဉ်ကျပ်စွာ တစ်သက်လုံးနေသွား၇၇ှာတယ်..။ သူ့၇ဲ့ အသုံးမကျတဲ့ အတ္တ ကြောင့်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်..။ တကယ်လို့သာ မနူဟာမင်း သာ ပိဋ္ဋိကတ် ၃ ပုံ နဲ ရှင်အာရဟံ ကို ကြည်ကြည့်ဖြူဖြူ ပင့်ဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆို၇င် သာသနာ ပြု၇ာလည်း ရောက်မယ်. သထုံပြည့်၇ှင် ဘု၇င်မင်းမြတ်အနေနဲလည်း မင်းလုပ်အုပ်ချုပ်ခွင့်၇မယ်.။ တစ်ချက်ခုတ် ၂ချက်ပြတ်ပဲ.။ အနော်၇ထာ က သူ့ကို ကျေးဇူးတောင်တင်အုံမယ်..။ :D
ဘု၇ားေ၇ှ့ က သပိတ်ကြီး..မနူဟာဘုရား..
မနူဟာမင်း..(ရွာထဲ က အန်ဇာတုံးရဲ့ နှတ်ခမ်းမွေးနဲ တူသလိုလို... ) :D
မနူဟာ ဘုရားလည်း ဖူး ပြီးေ၇ာ. နေ့လည် ၂ နာ၇ီကျော်နေပြီ.. လူတွေကလည်း တော်တော် ပင်ပန်းနေပြီ။ ဘောစိ ကိုAyar River View Hotel ကို လိုက်ပို့ပြီး.. ကျွန်မ တို့တည်းမယ့် ယာခင်းသာ ဟိုတယ် ကို လိုက်ပို့ပါတယ်.. ဟိုတယ်ေ၇ာက်တော့ ၂ နာ၇ီခွဲနေ ပြီ.. ၄ နာ၇ီမှာ ပြန်ထွက်မှာ မို့ ကောင်းကောင်း နားချိန်မ၇ခဲ့ပါဘူ..။ အချိန်တစ်နာ၇ီခွဲအတွင်းမှာ လူသုံးယောက် အလူအယက်ေ၇ချိုးပြီး ပြင်ဆင်၇ပါတယ်.. ။ညနေ ၄ နာ၇ီထိုးမှာ ဘောစိတို့ ကို ဟိုတယ်မှာ သွားခေါ်ပြီး. ဓမ္မရံကြီးဘု၇ား ဆီသို့ ခ၇ီးဆက်ခဲ့ ကြပါတော့တယ်.. ..
အဲဇာတုံးက အဲသလို နှုတ်ခမ်းမွေးကြီးနဲ့ ဆိုပါကလား..
ဟိုက် … ပေါ်ကုန်ပြီ ။
အံစာတုံး နှုတ်ခမ်းမွေး အဲဒီလောက် မရှည်ပါဘူးဂျ … ။ ရေးတေးတေးလေး ပါပဲ။
မမ We R One ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ … :D :D
ဒုတိယမြောက်ပုံက ပုဂံသွားရင်အောက်ကနေပင့်ရိုက်မယ့်လို့ ကြုံးဝါးထားတဲ့ပုံဗျာ
ကိုပေါက် ကိုယ်စား ၇ိုက်ပေးထားတာ.. အဟီး.. :D
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ခင်ဗျား
ကျုပ် စိတ် ကျပ်တည်းနေချိန်မှာ
မနူဟာ ဘုရား ကို ဖူးမျှော်ခွင့်ရတဲ့အတွက်
ရွာထဲ မ၀င်တာ နည်းနည်းပဲ ရှိသေးတယ် မောင်ပေ တယောက် နဖူးတင်မကဘူး ထိပ်ပါ ပြောင်သွားတယ်။ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ.. နောက် ကြုံမှ သင်တုန်းဓါး လက်ဆောင်ပေးမယ်။ အားလုံး ညီသွားပြီး ဘောသမား ကေ ဖမ်းနိုင်အောင်.. ဟဲဟဲ..
ပုဂံကို သုံးကြိမ်ရောက်ဖူးပေမယ့် ဓါတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာ
ပုဂံဘုရား ပုံတွေ မျှော်နေပါသည်..
ကျမလည်း အဲ့လိုပဲ အမြဲတွေးမိတယ် ဘာလို့များ မတွန့်တိုရမှာကို တွန့်တိုပြီး ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာခဲ့သလဲလို့ သူ့နှုတ်ကြောင့် ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ရတာပါ မျှဝေလိုတဲ့စိတ်မရှိပဲ တကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန် အတ္တကြီးတယ်လို့ ကျမလည်း ထင်မိတယ်
ဆက်ပါအုန်းနော် ဒီတခါ တင်တာ ၂ နဲ့ ကြား နည်းနည်း ကြာသွားသလားလို့ မအားဘူးထင်ပါရဲ့
ဟုတ်ပါ့ မpooch.. အလုပ်နည်းနည်း များနေတာနဲ.. နောက်တစ်ခါ မကြာစေ၇ပါဘူး၇ှင့် ..
မနူဟာ ဘုရင်ကြီးက အဲဒီ ဘုရားကြီးကို တည်ပြီးတော့ ရေစက်မချခင်မှာ ပုဂံက ထွက်ပြေးရင်း လမ်းမှာ ရေနစ် သေဆုံးသွားတယ်။
မနူဟာဘုရားပွဲနဲ့ ဆွမ်းသပိတ်လောင်းပွဲက ပုဂံမှာနာမည်ကြီးပြီး၊